ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အတွ က် တရုတ်ပြည်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေ တဲ့ ဆရာ ဝန်ပညာရှင်တစ်ဦးပြော တဲ့ သိသင့် တဲ့ ဗဟုသုတတချို့ – Shwewiki.com
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အတွ က် တရုတ်ပြည်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေ တဲ့ ဆရာ ဝန်ပညာရှင်တစ်ဦးပြော တဲ့ သိသင့် တဲ့ ဗဟုသုတတချို့
February 11, 2020 By admin Knowledge
ဝူ ဟန့်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ပြည်မှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက် တိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ အသက်ရူလမ်း​ကြောင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြေတဲ့ ဗဟုသုတတချို့ ဖတ်မိလို့ သိသင့်တယ်ထင်တာလေးတွေ ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်။
၁. ကိုရို နာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သာမန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ရှင်သန်နိုင်သလဲ ။ ဖြေ-ဗိုင်းရပ်စ်က သက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်ထဲမှာသာ ရှင်နိုင်တာပါ။ အခန်းအပူချိန်အောက်မှာ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ ၂. ပညာရှင်တွေက ပြောတယ်.. ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အပူချိန် ၅၆ စင်ဒီဂရိတ်ရှိတဲ့ရေပူထဲ နာရီဝက်ထည့်ရင် သေတယ်ပြောတယ်။ ၁ဝဝ ဒီဂရီရှိထဲရေထဲထည့်ရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ သေသလဲ…။ ဖြေ – ဗိုင်းရပ်စ်က သက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲပဲ ရှင်သန်တာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာ မရှင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသုံးအဆောင်တွေကို ရေနွေးပူနဲ့ပြုတ်စရာမလိုပါဘူး။
၃. ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ နေ့စဉ်အသုံးအဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဥပမာ — တံခါးလက်ကိုင်၊ ဖုန်းပေါ်ရောက်သွားရင် ဘယ်လောက်ကြာ အသက်ရှင်နိုင်သလဲ…။ ဖြေ – ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အစာခြေလမ်းကြောင်းကနေ ကူးစက်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တံခါးလက်ကိုင်၊ ဖုန်းတွေကို ကိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့ နှာခေါင်းမနှိုက်ဖို့၊ မျက်စိကိုမပွတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကခွာတာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ၄. အိမ်မှာ ၈၄ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ အရက်ပျံတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်တစ်ခုကို အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ…။ ဖြေ – အဲဒီပိုးသတ်ဆေးနဲ့ အရက်ပျံက အခြားဗိုင်းရပ်စ်တချို့ကို သတ်နိုင်ပေမယ့် ဒီဗိုင်းရပ်စ်က လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကခွာတာနဲ့ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးသုံးလည်း မထူးပါဘူး။
၅. ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေကို ကူးစက်နိုင်သလား..။ဖြေ-အခုချိန်ထိတော့ ကူးစက်တာမျိုး မတွေ့သေးပါဘူး။ ၆. အိမ်ပြင်ထွက်တဲ့အခါ တစ်ခါသုံးလက်အိတ် ဝတ်သင့်ပါသလား..။ဖြေ- မလိုအပ်ပါဘူး။ ချမ်းရင်တော့ ဝတ်ပါ။ လက်ဆေးနေဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
၇. အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ဆေးဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ ရိုးရိုး mask မျိုး အထပ်ထပ်တပ်ရင် ကာကွယ်ရာရောက်ပါသလဲ..။ဖြေ- မလိုပါဘူး။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ တစ်ထပ်ပဲတပ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ၈. သူစိမ်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ ဘယ်လောက်အကွာအဝေးမှ စိတ်ချရသလဲ.. စကားမပြောဘဲ ပခုံးတိုက် ဖြတ်လျှောက်ရင်ရော ကူးတတ်သလား…။ဖြေ- အကွာအဝေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာက လူတည့်တည့် နှာချေတာမျိုး၊ ချောင်းဆိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
၉. ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းတွေ စားလို့ရပါသလား.. ဥပမာ– ဆလတ်။ ဖြေ – ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အစာခြေလမ်းကြောင်းက ကူးစက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ စားလို့ရပါတယ်။ ၁ဝ. ရောဂါပျိုးချိန်ရှိပါသလား.. ရောဂါပျိုးချိန်က ကူးစက်နိုင်ချေရှိနေပြီလား.။ ဖြေ – ရက်တိုဆိုရင် ၁ရက်၂ ရက်ပါ၊ ရက်ရှည်ဆိုရင် ၁ဝရက် ၁၂ ရက်ပါ။ သာမန်အားဖြင့်တော့ ၇ ရက်ပါ။ ဆရာဝန်စောင့်ကြည့်ချိန်က ၁၄ ရက်ပါ။ ရောဂါပျိုးချိန်က ကူးစက်နိုင်ချေများပါပြီ။ လူနာ ကိုယ်အပူချိန်မြင့်ချိန်က ကူးစက်နေပါပြီ။
၁၁. ကိုရိုနာနဲ့ သာမန်အအေးမိရောဂါ ဘာကွာခြားသလဲ..။ ဖြေ – ကိုရိုနာရောဂါရဲ့ အဓိကက ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တာပါ။အခြားသာမန်အအေးမိရောဂါက သိပ်မမြင့်ပါဘူး။ တချို့လူနာတွေမှာ အသက်ရူရခက်တာ၊ တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂. လောလောဆယ် ကုသနိုင်တဲ့ဆေး တွေ့ပြီလား..။ဖြေ- မတွေ့သေးပါဘူး။ သက်သာအောင်နဲ့ အားပေးတာလောက်ပဲ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
၁၃. ရောဂါအလိုလိုပျောက်သွားတဲ့လူမှာ ဘာထူးခြားချက်ရှိသလဲ၊ ရောဂါကျွမ်းပြီး သေသွားသူမှာရော ဘာထူးခြားချက်ရှိသလဲ…။ ဖြေ- ရောဂါအလိုလိုပျောက်တာက ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ရောဂါခုခံအားကောင်းတဲ့ လူတွေပေါ့။ သေဆုံးသူအများကတော့ လူအိုတွေနဲ့ တခြားရောဂါရှိသူတွေပါ။၁၄. ဒီရောဂါအတွက် ရိုးရိုး အအေးမိ နှာစေး ချောင်းဆိုးဆေးတွေ ဒါမှမဟုတ် antibiotic တွေသောက်ရင် ရလား..။ ဖြေ- အကျိုးမရှိပါဘူး။
From Nine2 Sanay FB
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ် လို့ မြန်မာဆန်ဆ န်လေးဝတ်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားလာဖူး တဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး ရဲ့ချစ်စဖွယ် ပုံလေးများ
ကိုရိုနာဗိုင်း ရပ်စ် အဆု တ်ရောင်ရော ဂါ အဓိကဖြစ်ပွား ရာ တရုတ်နိုင်ငံ စက်ရုံများအခြေအနေ